Ruoko Rwakabatwa Nesimbi Detector
Handheld zvinoputika Detector
Microwave Muviri Scanner
Quality hurongwa chitupa
Techik Ongororo Chirevo
Techik Instrument Yakapindwa MAKS-2021 ine Yekupedzisira X-ray Mikwende Scanners
Yegumi neshanu Moscow International Aeronautics uye Space Exhibition (MAKS-2021) yakatanga neMuvhuro muguta reZhukovsky, dunhu reMoscow, Russia. MAKS-2021 yakwezva anopfuura mabhizinesi mazana mashanu emaaerospace kubva kunyika dzinopfuura makumi mashanu nematunhu kuti atore chikamu muchiitiko ichi Russian Presiden ...
Techik Yakakwira Kugadziridza X-ray Mikwende Scanner Yakagamuchirwa neMalaysia Atomic Agency
Munguva pfupi yapfuura, pamwe chete neTechik yakabvumidzwa mudiwa muMalaysia, zvakaziviswa kuti Techik yakakwira gadziriso X-ray mukwende scanner TE-XS6550 yakatenderwa neAtomic Agency yeMalaysia. Techik ichapa yakanakisa sevhisi kune vatengi pasi rese sepakutanga.
Techik Yakakwira Kugadziridza Yakakwenenzvera Mikwende Scanner Inochengetedza Fekitori muVietnam
Techik Yakakwira-kumisikidza X-ray Mikwende Scanner uye Famba Simbi Detector Won Mukurumbira muKuwait
Techik yakakwira-gadziriso X-ray mukwende scanner TE-XS5030C uye famba simbi detector TE-SD2 akaisirwa muKuwait indasitiri nzvimbo. Aya masisitimu anochengetedza kupinda kwekuchengeteka. Mutengi akagutsikana nekuisa kuri nyore uye nyore kushanda panzvimbo.
X-ray pasuru bhokisi scanner mu logistic indasitiri
Izvo zvakakosha zve X-ray yekuongorora system mune logistic Indasitiri Munguva pfupi yapfuura, nhau yakagadzira kutapira muChina - rimwe bhizinesi rine mukurumbira rakagadzira modhi yemachira semushandi weX-ray mukwende scanner. Icho chiito chakashata chinofanirwa kurangwa nehurumende yeChinese. Sezvatinoziva, zviri pamberi X-ray inspecti ...
$ 2 nemari 000 zviuru000 chengetedzo yekuongorora system yekuraira yakapihwa Techik kubva Line 3, Wuxi Metro
Shanghai Techik yakabudirira kuhwina mubhizimusi reWuxi Metro Security X-ray Inspection System Procurement Project seinopfuura mamirioni maviri emadhora ekuUS musi wa14 Chikunguru, 2020. Techik ichapa TE-XS6550DB X-ray mukwende scanner, TH-ED09 inoputika detector kune ino purojekiti. Panguva iyoyo, X-ray mukwende scanner ...
Techik Saiti Kudzidziswa KweX-ray mukwende scanner uye simbi detector
Saiti mareferensi eWalk simbi detector (thermo kuona sarudzo)
Kufamba nesimbi detector ine Thermometry Rinoshanda inova yekufamba nesimbi detector yekushisa tembiricha yemunhu inova isiri-yekudyidzana tembiricha kuyera kuburikidza ne infrared sensor.
FAT yeX-ray mukwende scanner yakapihwa kuEast Africa
ne admin pane 20-07-10
Kuiswa nyowani kweXray mukwende scanner muchiteshi chechitima
Musi wa1 Chikunguru, Techik yakapedza kumisikidza X-ray mukwende scanner nesimbi detector muZhangjiagang chiteshi. Iyo huru modhi ndeye TE-XS100100DB mbiri danda, ine tunnel iri 100cm * 100cm. Kuti uvandudze danho rekuchengetedza uye uite kuti kuongorora kuve nyore, Dual beam muchina unopa maonero maviri pane kuongorora ....
Kugadzwa Walk Through Metal Detector
by pamusoro 20-02-12
Kugadzwa Small Size mukwende Scanner
X Ray Detector , X-Ray mukwende Scanner , X-Ray Equipment , X Ray mukwende Scanner 5030 , Dual View X Ray mukwende Scanner , X Ray Scanner , All Products